Owe DA ukhala ngokungahambeki emgwaqeni engenela emakhaya Osizweni, njengoba kuqhubeka ukhetho – Isambane News
Home > Featured > Owe DA ukhala ngokungahambeki emgwaqeni engenela emakhaya Osizweni, njengoba kuqhubeka ukhetho
Owe DA ukhala ngokungahambeki emgwaqeni engenela emakhaya Osizweni, njengoba kuqhubeka ukhetho
May 8, 2019 May 8, 2019 Isambane News
Udaba ngu: Tebogo Moloi
Owe DA ukhala ngokungahambeki emgwaqeni engenela emakhaya Osizweni, njengoba kuqhubeka izinketo ezikhethelekile(Special votes).
Nakuba luqale kahle ukhetho lwaba khethekile olwaziwa ngama-Special votes Osizweni oweDemocratic Alliance ukhala ngokungahambeki emgwaqeni engenela emakhaya kuleyandawo. “Ukuqhelelana kwemizi nemigwaqo engalungile kubambezela ukuqhubeka kwaloluhlelo” kubeka uHlatshwayo.
UHlatshayo ukusho lokhu njengoba ebehamba nezithunywa zabakwa IEC, bebephuma bengena emakhaya alabo ababhalisela ukuvota ngasese.
UHlatshwayo uthi enye yezingqinamba abahlangabezane nayo eyokungatholakali kwamagama abanye ababebhalisele ukuvota ngasese nalapho khona esola inhlangano eyengamele ikhuetho uIEC, eNewcastle ngokungawenzi umsebenzi wabo. Yize kunjalo uHlatshwayo uncome uzakwabo bamanye amaqembu ngokubambisana nangokusebenzisana okuhle okukhona wathi uthemba ukuthi koze kuqudwe kunjalo. “Leli elilodwa lamawadi anokuthula ngoba singabaholi bamaqembu siyakwazi ukuthi uma ukhona lapho singaboni ngasolinye sibonisane” kuphetha uHlatshwayo
Ukhetho lwangasese lubandakanya abantu asebebadala, abakhubazekile, abakhulelwe bonke abangeke bekwazi ukufinyelela ezikhungweni zokuvota, kanye nalabo abangeke baphumelele ukuyovota ngoLwezithathu. Zibalelwa kuzinkulungwane ezi-32000 izikhungo zokuvota ezivuluwe kuzwelonke kanti babalelwa kuzi-770, 000, libonakale liphezulu isasasa kumalungu omphakathi. UMnu. Eric Khumalo waseMndozo obesevotile uthi, konke kuhamba kahle kanti uzizwa ejabule njengoba esekwazile ukukhetha uhulumeni amthandayo.
Umnu Hlatshwayo we-DA
Lona umzuliswano wesibili ezinkethweni zikazwelonka kanye nezifundazwe olama ukhetho lwabasemazweni angaphandle, bese kuba ukhetho lukawonke wonke oluzosingathw ngoLwesithathu.